စိုင်းနော်ခမ်း..ထားခဲ့တဲ့တွေးစရာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » စိုင်းနော်ခမ်း..ထားခဲ့တဲ့တွေးစရာ…
Posted by thureinmaung on Mar 2, 2013 in Community & Society, Society & Lifestyle | 20 comments
တနည်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အချုပ်အခြားအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်
ပါရက်နဲ့ နိုင်ငံမဲ့ ကလေကချေလို စစ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံ ၊စစ်ချင်တဲ့ တရားရုံးကစစ်ဆေး၊ ပေးချင်တဲ့
စိုင်းနော်ခမ်း လို ဘိန်းရာဇာကို အစိုးရကို ကယ်ခိုင်းပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာ ဘိန်းဖြန့်ခိုင်းမလို့လား။ ဘိန်းရာဇာ တပည့်သားချင်းများဖြစ်နေလေရော့သလားပဲ။
အစိုးရမှာ ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဘိန်းဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဓမြကိုကယ်ဖို့က ဘာမှအရေးမကြီးဘူးကွ။
အကြောင်းကိုဒီ case အပေါ်မှာအခြေခံပြီးကိုယ်တွေးမိသလိုဆွေးနွေးထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်..
ကိစ္စကိုတာဝန်ယူဘို့လိုသလို၊ လူတွေအာရုဏ်စိုက်တဲ့ ၊ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့
အတွက် critical thinking, analytical thinking ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီ case study
ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကိုကတွေးစရာ လို့ ပေးထားတာပါခင်ဗျာ…
ကို thurein maung ရေ ၊
ဒီ စိုင်းနော်ခမ်း ကိစ္စ နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ၊
အဘ ရဲ့ ” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၉ ) ( စိုင်းနော်ခမ်း ) ” Post မှာ ၊
နဲနဲ တို့ထိထားတယ်နော် ၊ အားပေးပါအုန်း ။
တရုတ် မုန်းတီးရေး လှုံ့ဆော်မှု အတွက် အကွက်ကောင်းတော့ ၇သွားတယ်ထင်ပါတယ် ။
တစ်ခါတစ်လေ စံပြလုပ်ပြရတာ တွေ ရှိတဲ့ အခါမှာ စိုင်း နော်ခမ်း ဖြစ်သွာတာရယ်၊ မြန်မာဖြစ်သွားတာ ရယ်တိုက်ဆိုင်မှုလောက် အနေနဲ့ ဘဲ တွေးမိပါတယ် ။
တကယ်လို့ ခေါင်းဆောင် က လာအိုနိုင်ငံသား (သို့) ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်နေရင်လည်း ဒီလိုဘဲ လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ရိုးသားစွာ ယုံကြည်မိပါတယ်။ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် မြင်ပြီး ခံစား ကြတယ်လို့လဲတဘက်ကနေ စာနာ နားလည်မိပါတယ် ။
ကျွန်တော့်ကတော့ ဘယ်နိုင်ငံသားအဖြစ် မခံစားဘဲ ရာဇ၀တ်မှု တစ်ခု ကြူးလွန် လို့ ခံရတယ်လို့ဘဲ မြင်မိပါတယ် ။ စိတ်တော့ မကောင်းပါ ။
စိတ်မကောင်းတဲ့ အထဲမှာ သူ့လိုဘဲ ရာဇ၀တ် မှုတွေ ကျူးလွန်ရက်နဲ့ လွတ်နေသူတွေ ၊ အကာအကွယ် ပေးခံထားရတဲ့ သူတွေ ရှိနေတာလည်းတစ်ခုပါ ပါတယ် ။
အစိုးရ အနေနဲ့လည်း တောင်းဆိုခွင့် အနေနဲ့ အပြစ်ဒါဏ် လျှော့ပေါ့ ပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးနိုင်ရုံ အပြင် မရှိပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ သာမာန် ပြည်သူပြည်သားတွေ မသိတဲ့ အချက်တွေ ဘယ်လောက် ရှိသေးသလဲ မသိတော့ မဝေဖန်လိုပါဘူး။
ကိုထူးဆန်းပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာအစိုးရဟာ နိုင်ငံသားတွေအပေါ်စောင့်ရှောက်မှုအလေးထားမှုဟာ မရှိသလောက်ဖြစ်နေတာကိုတော့ နည်းနည်း စိတ်ထဲဘ၀င်မကျဘူးဗျာ သူတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတမျိုးပေါ့။
ကိုသူရိန်မောင်ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်။ အမေရိကန်(ရေးတာမမှန်ရင်ခွှင့်လွှတ်ပေးပါသူကြီးရေ) ဝေါလ်ထရိတ် လိုခံလိုက်ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကန်တွေလုပ်သလို ဘယ်နေရာရောက်ရောက် လိုက်သာသတ်ဗျာ ကူတောင်ရှာပေးဦးမယ်။ အခုလည်းစိုင်းနော်ခမ်းလွတ်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်လွတ်စပါယ်နိုင်နေတယ် ထင်မိလို့ပါ။ စိန်ခေါ်မှုလို့ထင်နေတယ်။ ပြစ်ဒါဏ်မခံခင် ခံစားခွင့်တခုခု တောင်းဆိုပေးတာမျိုးလေးများ ဒို့အစိုးရကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားပေါ့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဘိန်းရာဇာပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေသေးတယ်ဗျာ တရုတ်အစိုးရကလူသားအားလုံးကောင်းဖို့အတွက် ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်သတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ပဲ…
ကိုရွှေကြည်ရေ့ ကျွန်တော်မပြောရဲတော့ပါဘူး. .သေသွားပြီးသားလူနဲ့ဆိုင်တာဘဲပြောမိတာပါဗျာ…
ကိုသူရိန်မောင်ရေ ကိုရွှေကြည်မဟုတ်ပါ မရွှေကြည်ပါ အသုံးအနှုန်းတွေက တခါတလေ အဲ့လိုရေးရတာ ပိုအားရလို့ပါရှင်။
TV ကနေတိုက်ရိုက်မပြသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်
ဆောရီး ကိုရွှေကြည်မဟုတ်တဲ့ မရွှေကြည် ခင်ဗျာ.
ဘ၀ပေးအခြေအနေအရ မို့မို့မြင့်အောင်က ယောင်္ကျာလေးလိုဝတ်စားနေထိုင်
မဆီမဆိုင် ကာတွန်းအောပီကျယ် စာပေဟောပြောပွဲတွေမှာ ပြောသွားတာလေးအမှတ်ရတယ်…..။
” ဟေ့ဟေ့ အဲဒါတို့ မြန်မာ အဲဒိမှာအဲဒိမှာ ” ဆိုတာလေးပါ….။
မကောင်းတဲ့လူက သူ့လမ်းသူရွေးသွားတာကို ကိုယ်ကအရေးတယူလုဎ်ပြီး’ စဉ်းစားနေရင် ကိုယ့်အတွက်အိပ်ရေပျက်တာကလွဲလို့ ဘာမှအဖတ်မတင်နိုင်ဘူးလို့ထင်မိတယ်
အင်တာနက်အပေါ်မှာ မြင်ရကြားရသလောက်ပဲ သိပါတယ်။
သေချာတာက အဲဒါ အကုန် မဟုတ်ပါဘူး..။
တရားခံကို သူ့တိုင်းပြည်ဥပဒေအတိုင်းစီရင်တာမို့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး…။
စီရင်ပုံလေးတော့ မကြိုက်ပါဘူး…။ ဒါပေမယ့်လဲ မကြိုက်လဲ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ…။
ကမ္ဘာပေါ်က တိုင်းပြည်တွေအားလုံး တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ လေးစားမှု့ချင်း အရေးထားမှု့ချင်း မတူပါဘူး။
ဆလိမ် ဆရာကြီး says:
မင်းတို့ကောင်တွေ ကြည့်ရတာ စိုင်းနော်ခမ်းအတွက် သနားနေသလိုလို
သိပ်ပြီး သနားတတ်နေရင် သနားစရာလူတွေ မင်းတို့နေတဲ့ လမ်းထဲမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မြို့ထဲမှာ အများကြီးပဲကွ
တရုတ်ကွန်မြူနစ် အရိုင်းအစိုင်း အစိုးရကလဲ human rights ဆိုတာကို နားမလည်ဘူး။
အခု ကိစ္စမှာ မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်နေတာဟာ အကြောင်းရှိလိမ့်မယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ တရုတ်နှစ်ကူးပွဲတုန်းက တရုတ်သံအမတ်က ရဲချုပ်ဆီမှာ တရုတ်ဘိန်းရောင်းတွေ လွှတ်ပေးဖို့ ကပ်တိုး တောင်းထားတာရှိတယ်
အဲဒီဟာကို ရှင်းလာရင် ပျော်စရာပဲ
Myanmar and china relation is unilateral in every issue.China is always upper hand.
စိုင်းနော်ခမ်းကို စီရင်ချက် ချလိုက်တော့ ထိုင်းက သူ့ဆီမှာသာ တရားစွဲမယ်ဆိုရင် သေဒဏ်ပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ သက်သေမရှိလို့ ပြောဖူးတယ်။ ဒါက ဥပဒေပိုင်းက စဉ်းစားဖို့…
တရုတ်သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက် အသတ်ခံရတာမှာ သာမန်ရိုးရိုး သင်္ဘောသားဆိုတာထက် သေသူတွေသည် တရုတ်စစ်သား ထောက်လှမ်းရေးများ ဖြစ်လို့ ဒီလောက်အထိ တရုတ်ကြီး ဒေါသူပုန် ထသွာတယ်လို့ ယူဆတယ်။ မြန်မာအစိုးရဖက်က သူ့အတွက် အရေးမကြီးလို့ အသာငြိမ်နေလိုက်တာပါ၊ ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာတုံးကဆို အမေရိကန် အစိုးရက ဖမ်းဝရမ်းထုတ် တောင်းတာတောင် ပေးတာမှ မဟုတ်တာ။ တရုတ်က သူ့ကြွက်သားကို ညှစ်ပြလိုက်တာပါ။ မောင်းသူမဲ့ လေယဉ်ပျံနဲ့တောင် အသေဖမ်းဖို့ စီမံခဲ့တယ်ဆိုတာ တမင်ထုတ်ပြောတာ တနည်းအားဖြင့် သူလိုချင်ရင် အင်အားသုံးဖို့ ဝန်မလေးလို့ သတိပေးတာပဲ။ ဒါက လုံခြံရေးနဲ့ ဆိုင်လို့ အနာဂတ်မှာ သိထားဖို့..။
ဝမ်ပေါင်အရေးအခင်း အစီရင်ခံစာ ထွက်မလာနိုင်ဖြစ်နေတယ်၊ ဒီကြားထဲ လယ်သမား ပြသနာတွေ ထပ်ဖြစ်တယ်။ တရုတ် အကျိုးစီးပွား ထုနဲ့ထည်နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ အခုကိစ္စသည် နောင်အရှုပ်အရှင်း ပဋိပက္ခများ ရှိလာရင် သိပ်စိုးရိမ် စရာကောင်းနေပီ။ နှစ်နိုင်ငံခြင်း တဲ့ထိန်းမရနိုင်လို့ နိုင်ငံတကာ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ အကူအညီနဲ့ လေ့လာစောင့်ကြည့်ထားမှ တော်ရာကြမယ်။ ဥပဒေပညာရှင်များ သက်ဆိုင်ရာ လူဂျီးများကလည်း မပြေးသော် ကန်ရာရှိ အခုထဲက စကားဝိုင်းဖွဲ့ ဆွေးနွေးထားသင့်ပါပြီ။